हाम्रो खबर-तपाईंको हरपलको साथीसँग पलपलको खबर । हाम्रो खबर – तपाईंको हरपलको साथीसँग पलपलको खबर ।
“सर्वाधिक विवादपछि अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो । अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । यसैबीच अर्को खुसीको खबर बाहिरिएको छ । अमेरिकाले नेपालमा फेरि डलरको खोलो बगाउन लागेको छ । अमेरिकाको यो सहयोगलाई धेरैले रहस्यमय भन्दै प्रश्न
“काठमाडौं, ३० फागुन । नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीले म्युजिक भिडियो बनाउने गायक प्रकाश सपुतलाई धम्की दिनुभन्दा आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी धन्यवाद दिनुपर्ने बताएका छन् ।” “नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै
“काठमाडौं, ३० फागुन । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एक लाख म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया सुरु भएको छ । स्थानीय निर्वाचनको लागि १ लाख म्यादी प्रहरीको चैत्रमा आवदेन खुलाउने तयारी गरिरहेको छ ।” “मतदान केन्द्र अनुसार सम्बन्धित जिल्लाहरुले म्यादी प्रहरी भर्ना...
“कृष्णजस्तो,ब्वाइफ्रेन्ड, रामजस्तो, हज्बेन्ड चाहिन्छ : नायिका सुहाना थापा,
“अष्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वार्नको, निधन”
“यूएईले दियाे, नेपाल,लाई १ सय ७६ रनकाे लक्ष्य”
“फिलिपिन्स, सिमित रन मै समिटियो, फिलिपिन्सविरुद्ध नेपालको शानदार जीत”
“कुसल भुर्तेल हाने सतक”नेपालले फिलिपिन्सलाई दियो २ सय १९ रनको लक्ष्य, कुशल र दीपेन्द्रको कीर्तिमानी साझेदारी”
“प्रकाश सपुतलाई रञ्जीत तामाङको चुनौती”माओवादी हरु कोइपनि अपहेलित छैन।?
“प्रकाश सपुत,लाई सुदन किराती,को प्रश्न- ‘राजतन्त्र भए यसरी नै संगीत” क्षेत्रमा, खेल्न पाउनुहुन्थ्यो त ?’?
‘त्यही दिन मनाउला नारी दिवस’-लक्ष्मी सिग्देल?
‘पल गायिका काण्ड’ त्यो रात होटलमा जे गर्यो ढोकाको चुक्कुल्ले गर्यो…?
“ठुलै हिम्मत बोकेर, आउनुपर्छ भन्दै नायीका, प्रियंका कार्की कसको, पक्ष्यमा बोलिन ??
“काठमाडौं । म,हामा,रीको समयमा विश्वास नलाग्ने घटना सार्वजनिक हुन थालेका छन् । अहिले सामाजिक सजालमा एउटा भिडियो निकै भाइरल भएको छ । महामारीमा ज्या न गु मा एकाहरुलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार अन्तिम संस्कार गर्नुपर्छ । तर यस्ता पनि आफन्त हुन्छन्...
“अष्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वार्नको, निधन”?
“नेपालकाे विश्व कप, खेल्ने सपना, अपूरै, यूएईसँग ६८ रनले, पराजित”?
“यूएईले दियाे, नेपाल,लाई १ सय ७६ रनकाे लक्ष्य”?
“कप्तान सन्दीप भन्छन्- जिउ-ज्यान लगाएर नेपाल,लाई विश्वकपमा पुर्‍याउने, आशा छ”?
“फिलिपिन्स, सिमित रन मै समिटियो, फिलिपिन्सविरुद्ध नेपालको शानदार जीत”?
“के गर्लान, महामन्त्रि, गगन थापा अब ??
“माओवादी छोडेर एमाले, प्रवेश गरेका,लाई प्रचण्डको व्यङ्ग्य–’बरु विप्लव, वैद्य र बिजुक्छेको, पार्टीमा जानू’?
“ज्ञानेन्द्र शाहीको राप्रपा प्रवेश संगै देशब्यापी रूपमा ठुलो जनलहर पार्टीमा प्रवेश गर्दै”?
“ओलीले भने- गोरु ब्याउँदैन भन्थे, ‘सर्वाेच्च अदालतमा गोरु ब्यायो, अहिले गोरु ब्यायाे मात्र होइन, पाँचवटा बाच्छा पायो’?
“पाथिभरा माताले सबैको, मनोकामना पुरा गरुन, फाल्गुन ३० गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”?
श्री सिद्धीबिनायक भगवानको’ दर्शन गरि “तपाइको यो साता कति शुभः ? हेर्नुहोस् फाल्गुन २९ गते देखी चैत्र ५ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल”?
“पाथिभरा माताले सबैको, मनोकामना पुरा गरुन, फाल्गुन २८ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”?
“पाथिभरा माताले सबै,को मनोकामना पुरा गरुन, फाल्गुन २७ गते शुक्रबार, आज तपाईको, भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”?
“पाथिभरा माताले सबैको, रक्षा गरुन, फाल्गुन २६ गते बिहीबार, तपाईको भाग्य, कस्तो छ, हेर्नुहोस राशिफल,?
“काठमाडौं ।उमेरले उनी नबालिग नै छिन् । १७ वर्षको अपरिपक्व उमेरमै उनले जीवनको निकै कठिन परीक्षा दिनुपरेको छ ।” “जादुयी स्वरका कारण कलिलैमा उनले जुन ख्याति आर्जन गरिन्, त्यो आज दाउमा लागेको छ । लाखौं फलोअर्स भएका एक ‘स्टार’ को...
“काठमाडौं :गायिका समिक्षा अधिकारी पछिल्लो समयक चर्चामा छिन् । उनले, स्वर भरेका धेरै गीतहरुले बजारमा राम्रो चर्चा पाएका छन् । तर, समिक्षाको चाहना गायिकामा मात्र सिमित हुने छैन । उनले, चलचित्रको पर्दामा नायिका बन्ने इच्छा पनि व्यक्त गरेकी छिन् ।”...
डि’प्रेसनबाट बच्नका लागि नियमित सेवन गर्नुहोस् पुदीना, यस्ता छन् यसका अचुक फाइदा जानी राखौं,,,,
पेटमा ग्यास भरिने समस्या छ ? खानुहोस् यो बिरुवाको पात, १० मिनेटमै मिल्छ राहत,,,
यस्ता छन् सूजीको हलुवा खानुका अचुक ५ फाइदा,,,,,
रातभरी पानीमा भिजाएर राखेको प्याजको बोक्राको पानी पिउँदा शरीरमा हुन्छ यति धेरै फाइदा,,,,
“युक्रेनी राष्ट्रपतिको रुसी सेना,लाई चे’ता’वनी , ‘तिमीहरूसँग, अझै बाँ’च्ने मौका छ, भा’ग ’